पैसा भएर पनि सलमानले मनपराएको घोडा किन्न सकेका छैनन् !
Home / समाचार / पैसा भएर पनि सलमानले मनपराएको घोडा किन्न सकेका छैनन् !
पैसा भएर पनि सलमानले मनपराएको घोडा किन्न सकेका छैनन् ! 0
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान करोडौ पैसा कमाएर पनि एउटा घोडा किन्न सकेका छैनन् । सलमानसँग विश्वका सबै भन्दा महँगा गाडीहरू छन् । तर, उनले मन पराएका एउटा घोडा भने किन्न सकिरहेका छैनन् ।
हालै सलमानलाई सेतो रङको एउटा घोडा खुब मन परेको छ । उनले घोडा खरिद गर्न आफ्नो एजेन्टलाई अगाडि सारेर यसका लागि उनले २ करोडको बोली पनि लगाइसकेका छन् । तर, ओलोपाडमा बसोबास गर्ने घोडा मालिक सिराज खानले घोडा बेच्न चाहेका छैनन् ।
यसको कारण सिराज एकछिन पनि आफ्नो घोडालाई छोड्न नसक्ने बताइएको छ । गत वर्ष मात्र यही घोडाका लागि पञ्जाबको राजनीतिक बादल परिवारले १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बोली लगाएका थिए। यतिबेला पनि सिराजले आफ्नो घोडा सकबलाई बेच्न अस्विकार गरेका थिए । सिराज आफ्नो घोडा अमूल्य भएको बताउँछन् । उनले यो घोडा २०१५ मा जेसलमेरबाट १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए ।
यो घोडा महँगो हुनुको कारण हो यसको प्रजाति । सकब प्रजातिको घोडा दुर्लभ मानिन्छ। यसको आयु ६ वर्ष मात्र हुन्छ। तर, यसले विभिन्न हर्कत गर्नेगर्छ। सकब ४५ किलोमिटर प्रतिघन्टाको बेगमा दौडिन सक्छ। यो भारतको सबैभन्दा तीव्र गतिमा दौडिने घोडा पनि हो। सकबले अहिलेसम्म ३ वटा राष्ट्रिय अवार्ड जितिसकेको छ । ३१ जनवरीमा राजस्थानमा भएको जेसलमेर मरुभूमि महोत्सवमा पनि यसले अरु घोडालाई धेरै पछाडि छोडेको थियो ।
विश्वमा यो प्रजातिको घोडा अन्य दुई वटा देशमा मात्र छ । यो घोडासँग मिल्दोजुल्दो प्रजाति अमेरिका र क्यानडामा पाइन्छ । सलमान र बादल परिवार मात्र होइन, यसलाई किन्न अरु थुप्रै करोडपतिहरूले बोली लगाइसकेका छन् ।
रवि लामिछाने भगवान हुन् भन्दै अन्तर्वार्तामै रोए दिल निशानी मगर ! (भिडियो)-
OMG!कत्ति राम्रो सन्तपुर बस्ती, मुख्य ५ वटा हेर्नेपर्ने कुरा (हेर्नुहोस)